Oct 8, 2018	59 Viewed	raxanreeb 0 respond
GAROOWE(RAXANREEB)-Xog gaar ah oo Goor-dhaweyd kusoo dhacday Warqabadka Shabakadda Raxanreeb.net, ayaa sheegeysa in shirkii madax goboleedyada dalka ee lagu waday inuu tobanka bishan ka furmo magaalada Garoowe uu dib u dhacay kadib go’aan iyo cadaadis xooggan oo ka yimid beesha caalamka.
Xubno ku dhow Madaxda Dowlad Gobaleedyada ayaa Shabakadda Raxanreeb.net, u Sheegay in dib loo dhigay Shirkaan oo la filayay in Maalinimada Arbacada oo Taariikh-du ku beegan tahay 10-ka Bisha, waxaana la Filayaan inuu Qabsoomo Shirka oo ah mid Xasaasi ah 14-ka Bishan October ee 2018-ka.
Wararka ayaa sheegaya in beesha caalamka ay rumeysan tahay in qodobo kale oo shir ka dhaca Garoowe, kasoo baxa ay kasii dari karaan khilaafka, oo sii fogeyn karaan dowladda dhexe.
Si kastaba, kheyre ayaa la sheegay inuu ku adkeysanayo inaanu tegi doonin Nairobi, ayada oo uu horey u sheegay inaanu aqbali doonin in daraf saddexaad uu dhex-dhexaadiyo dowladda dhexe iyo madax goboleedyada, waxaana taas hadii u ku dhagnaado ay Dhidibada u siibaysaa Awooda Dowladda Federaalka oo aysan Muqdisho gacanteeda ku wada jirin.
Madax goboleedyada ayaa la sheegaya in ilaa 14-ka bishan siiyeen beesha caalamka, haddii xal lagu gaari waayana ay ka go’an tahay inay shirka qabtaan, ayna si dhab ah uga Go,aan gaaraan Xaalada Dalka oo ay Sheegeen inay ka saaran tahay Shacabka Masuuliyadda, waxaana Shirkan la Filayaa in Markii ugu horeysay ay ka Qeyb-galaan Madaxda Xisbiyadda Siyaasadda ee kasoo horjeeda sida ay wax u waddo Villa Soomaaliya